I-Artemisinin ingakhishwa kahle kusetshenziswa i-sonication ephezulu yokusebenza. Isizinda se-Ultrasonic sinika isivuno esikhulu kakhulu se-artemisinin sisebenzisa izixazululi ezinyene. Inqubo yokukhipha esebenzisa i-ultrasound ishesha kakhulu. Izimo zokucubungula kuma-extractors e-ultrasonic zilawulwa kahle, okuvumela ukuvimbela ukwehla kwe-biomolecule artemisinin ezwela ukushisa.
I-Artemisinin i-molecule ephilayo ekhona ngaphakathi kwezindlala ze-trichome zesitshalo se-Artemisia annua, esisetshenziswa njengomuthi olwa ne-malaria futhi ikhombisa amandla aphezulu njengomuthi wokwelapha ezinye izifo eziningana kubandakanya umdlavuza kanye ne-SARS-CoV-2. Indlela yendabuko yokukhipha ifaka izixazululi ezinobuthi futhi iyinqubo ebizayo, engaphansi kahle. Ukuze kukhiqizwe i-artemisinin ngezinga elikhulu ngaphansi kwezimo ezithandekayo kwezemvelo nakwezomnotho, kudingeka inqubo yokukhipha esebenza kahle futhi eluhlaza. Isizinda se-Ultrasonic yindlela esungulwe kabanzi yokusetshenziswa engasetshenziswa ngokuhlangana namanzi noma i-ethanol njengamakhemikhali awuketshezi angenabuthi. Isizinda se-Ultrasonic sekuvele kufakazelwe ukuthi sidle isivuno esikhulu se-artemisinin, ukuze ukukhiqizwa kwe-artemisinin kusheshe kukalwe kumanani amakhulu. Imishini yokukhipha i-Ultrasonic ye-batch ne-in-line processing ezingeni lezimboni itholakala kalula.
umshini we-ultrasonic I-UIP2000hdT ukukhishwa kweqoqo lezimboni le-artemisinin kusuka emaqabunga e-Artemisia annua.
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kwe-Artemisinin kusuka ku-Artemisia annua
Ukusetshenziswa kwe-ultrasound yamandla ekukhishweni kudlula ezinye izindlela zokukhipha ezicini ezahlukahlukene ezinkulu, kufaka phakathi isivuno, isikhathi sokukhishwa, ubungani bemvelo nokusebenza kahle kwezindleko.
I-UP100H ene-sonotrode ye-MS14 yokukhipha ama-botanicals, njenge-artemisinin evela emaqabunga e-Artemisia annua
Ubuthakathaka Bokukhishwa Kwe-Artemisinin Yesiko
Izindlela zendabuko zokukhipha i-artemisinin zidla isikhathi, zingalimaza ama-molecule we-bioactive artemisinin ngenxa yamazinga okushisa aphezulu asetshenzisiwe, futhi zibe nomthelela omkhulu kwezemvelo ngenxa yamakhemikhali awuketshezi asetshenziswa emazingeni okushisa aphezulu. Ngokwengeziwe, enqubeni esezansi ukuhlanzwa okukhulu kuyadingeka ukuze kususwe ukungcola kokukhishwa okungcolile.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Artemisinin Extraction
Ukufaka amandla i-ultrasound yokukhipha kunemiphumela ethile emihle eqinisa inqubo yokukhipha: Ukusebenza okuphezulu kwe-ultrasound kudala i-acoustic cavitation. Le cavitation ye-acoustic ikhuthaza ukukhishwa kwe-botanical ngokuphazanyiswa kwamaseli, ukuze ama-biomolecule abambekile akhishwe kumatrix eseli lesitshalo. Ngokwengeziwe, amandla e-cavitational aqinisa ukudluliswa kwesisindo okuhambisa ama-biomolecule afana ne-artemisinin ngokufanelekile ku-solvent ezungezile. Umgomo wokusebenza wesizinda se-ultrasonic unganikelwa kumandla womshini we-cavitation. Lokhu kusho ukuthi i-sonication iyindlela engeyona yokushisa, engeyona yamakhemikhali. Ukuba inqubo yokukhipha okungeyona eyokushisa kwenza isizinda se-ultrasonic sithandeke ikakhulukazi ngoba i-artemisinin iyinhlanganisela ezwela ukushisa, okusho ukuthi amazinga okushisa aphezulu (isb. 70 ° C) azobangela ukubola kwawo. Ngenxa yalokho, i-Artemisia annua L. yayingabiliswa emanzini ashisayo ukuthola i-artemisinin.
Khetha i-solvent oyithandayo
Isebenza ngamaqabunga amasha futhi omisiwe
Izimo ezilawulwa kahle
Ama-Solvents aluhlaza we-Ultrasonic Artemisinin Extraction
Ama-solvents wokukhipha ama-Classical asetshenziselwa ukukhiqizwa kwe-artemisinin afaka i-hexane, i-petroleum ether noma i-dichloromethane. Isizinda esiqhutshwa yi-Ultrasound sihambisana nanoma iyiphi i-solvent efaka izinyibilikisi ezimnene, eziluhlaza njenge-ethanol noma amanzi. Isizinda se-ultrasonic se-artemisinin nge-ethanol sisebenza ngokulinganayo uma siqhathaniswa nama-solvents anzima. Njengoba i-artemisinin ibonisa ama-cyclodextrins angancibiliki amanzi angasetshenziswa ukuthuthukisa isizinda samanzi abandayo se-artemisinin.
Yini Eyenza Isizinda se-Ultrasonic Artemisinin Sisebenze Kangaka?
Ukuqonda izinzuzo zesizinda esisizwe nge-ultrasonically, umthetho-mgomo osebenzayo wamandla we-ultrasound kumele uqondwe. Umshini wokuqinisa amandla we-ultrasound ubangelwa ikakhulu yisimo se-acoustic cavitation. I-Ultrasonic cavitation ibangela ukushayisana phakathi kwezinhlayiya ze-biomass ye-botanical (njenge-Artemisia annua L. amaqabunga), okuholela ekuhlukaneni okuhlukanisayo nokuncishiswa kosayizi wezinhlayiyana. Lapho ama-bubble e-cavitation ewa ebusweni bezinsalela zemifino, ukuguguleka komhlaba kanye nokukhiqizwa kabusha kukhulisa indawo yezinhlayiyana ngokuqhubekayo. Ngakho-ke ukuqiniswa kokudluliswa okukhulu kusiza ukukhishwa kwama-molecule afana namaprotheni, i-lipids, ushukela, amavithamini, ama-antioxidants, ama-phyto-chemical (isib., I-artemisinin) kanye nemicu yokudla. Amandla e-shear akhiqizwa nge-Ultrasonically athuthukisa ukungena kwe-solvent ku-matrix yeselula yendaba yezitshalo futhi kuthuthukise ukutholakala kwezingqamuzana zeseli, ngokulandelana. Lezi zinqubo zamandla we-ultrasonics zibhekele inqubo ebalulekile yokuqinisa etholakala lapho i-ultrasonication isetshenziselwa ukukhishwa kwe-botanical.
Amagagasi amandla e-ultrasound aphazamisa ukwakheka kweseli kwama-botanicals, akhiphe izinto ezihlanganisa izinto eziphilayo futhi akhuthaze ukudluliswa okukhulu phakathi kwezinto zokutshala kanye ne-solvent (isib. I-ethanol).
I-Ultrasonicator UP400St (ama-watts angu-400) ukukhishwa kwe-batch ye-artemisinin.
Imiphumela Yokucwaninga Eqinisekisiwe Yokukhishwa Kwe-Ultrasonic Artemisinin
Izifundo zesayensi eziningi zenziwe ukuze kuphenywe ukusebenza kahle kanye nokutholakala kokukhishwa kwe-artemisinin ultrasonic kusuka emaqabungeni ka-Artemisia annua.
UBriars noPaniwnyk bakhombisile “ukuthi i-ultrasound emazingeni okushisa aphansi inyusa isivuno se-artemisinin ekhishwe ku-A. annua cishe ngama-58% kanti okukhishwayo kubonakala kucwebile uma kuqhathaniswa nokugeleza okuvamile; ngakho-ke ukusetshenziswa kwe-ultrasound ngesikhathi sokukhishwa kunamandla okukhiqiza izindlela zokwelapha ezisezingeni eliphansi ze-artemisinin. ” (Briars noPaniwnyk, 2013)
UZhang et al. (2017) uphenye isizinda se-artemisinin esebenzisa i-propylene glycol methyl ether (PGME) njenge-solvent. Ukukhishwa kwe-artemisinin ekhiqizwe nge-Ultrasonically kwahlaziywa kusetshenziswa i-Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC). Imiphumela yokuhlaziya idwebele ikhwalithi yokukhishwa. Ngenxa yenqubo enhle yokuphindeka nokuzinza kwe-artemisinin ekhishiwe, isizinda esisizwe nge-ultrasonically sisebenzisa i-monoether propylene glycol methyl ether eluhlaza kanye nokusebenza kahle njenge-solvent ikhombisa amathemba amakhulu ekukhipheni nasekuhlukanisweni kwama-molecule we-bioactive kuma-botanicals. Isizinda se-Ultrasonic sisebenzisa i-propylene glycol methyl ether (i-PGME) njenge-solvent iholele ekusebenzeni okuphelele kokukhipha okuphelele kanye nemikhiqizo ephezulu ye-artemisinin. (bheka uZhang et al., 2017)
Kwesinye isifundo, uZhang et al. (2020) wethula isizinda se-ultrasonic se-artemisinin kusetshenziswa i-hydroxypropyl-β-cyclodextrin. Ukwengezwa kwe-cyclodextrin kuthuthukisa ukukhishwa kwe-artemisinin e-soluble engenawo amanzi futhi kuvumela ukusebenzisa amanzi njenge-solvent enezithelo ezinhle zokukhishwa. Isizinda se-Ultrasonic sihlangene ne-cyclodextrin sikhuphule inani le-artemisinin laya ku-8.66 mg / g, okungaphezulu kakhulu kwenani elihambisanayo lika-1.70 mg / g elitholwe emanzini.
Ukusebenza okuphezulu kwe-Ultrasonic Extractors ye-Artemisinin Production
Amasistimu wokukhipha we-ultrasonic aphezulu avela ku-Hielscher Ultrasonics asetshenziswa emhlabeni wonke ku-R&D, amancane, aphakathi nendawo kanye namazinga wokukhiqiza athengisa ngokuphelele ezimbonini ezahlukahlukene njengokudla, isengezo sokudla kanye nokukhiqizwa kwemithi. Ukusebenza okuphezulu kwe-ultrasonic kuqinisa inqubo yokukhipha futhi kukhulise isivuno ngaleyo ndlela kuthuthukiswe ukusebenza okuphelele kokukhiqizwa kwekhwalithi ephezulu. I-Hielscher Ultrasonics inikela ngemishini yokukhipha noma yimuphi umthamo wevolumu / wenqubo. Njengoba unolwazi lokukhishwa kwe-botanical iminyaka engaphezu kwengu-25, i-Hielscher Ultrasonics ingumlingani wakho omethembayo wokukhipha okuphezulu kwe-ultrasonic kusuka ku-Artemisia annua!
Ukusebenza okuphezulu, i-State-of-the-Art Ultrasonicators
Izici ezihlakaniphile ze-Hielscher ultrasonicators zenzelwe ukuqinisekisa ukusebenza okuthembekile, imiphumela yokuzala kanye nobungani bomsebenzisi. Amasethingi wokusebenza angafinyeleleka kalula futhi ashayelwe ngemenyu enembile, engatholakala nge-digital color touch-display nange-remote control yesiphequluli. Ngakho-ke, zonke izimo zokucubungula ezinjenge-net energy, amandla aphelele, i-amplitude, isikhathi, ingcindezi kanye nezinga lokushisa zirekhodwa ngokuzenzakalela ekhadini le-SD elakhelwe ngaphakathi. Lokhu kukuvumela ukuthi ubuyekeze futhi uqhathanise ama-sonication wangaphambilini futhi ukwandise inqubo yokukhipha i-artemisinin ekusebenzeni okuphezulu kakhulu.
Izinhlelo ze-Hielscher Ultrasonics zisetshenziselwa umhlaba wonke ukukhiqizwa kwezicucu ezisezingeni eliphakeme zezitshalo. Ama-ultrasonicators ezimboni zeHielscher angasebenza kalula ama-amplitudes aphezulu ekusebenzeni okuqhubekayo (24/7/365). Amplitudes angafika ku-200µm angenziwa kalula ngokuqhubekayo ngama-sonotrode ajwayelekile (ama-ultrasonic probes / izimpondo). Ngama-amplitudes aphakeme kakhulu, ama-sonotrode e-ultrasonic enziwe ngokwezifiso ayatholakala. Ngenxa yokuqina kwabo nokunakekelwa okuphansi, izinhlelo zethu zokukhipha ze-ultrasonic zivame ukufakelwa izinhlelo zokusebenza ezisindayo nezindawo ezifuna kakhulu.
Xhumana nathi manje ukuze ufunde kabanzi ngesizinda se-ultrasonic se-artemisinin esitshalweni se-Artemisia annua. Singajabula ukukuthumela imininingwane mayelana nezinhlelo zethu zokukhishwa kwe-ultrasonic kanye namanani entengo! Abasebenzi bethu abanolwazi oluningi bazokujabulela ukuxoxa nawe ngezidingo zakho zokufaka isicelo nokucubungula!